Ukuveliswa kwemilebe yaseChina kunye neFektri | UWangtong
I-Lipstick sisixhobo sokuthambisa esisetyenziselwa amanenekazi kubomi bemihla ngemihla. Ngaba uyazi ukuba uyifaka njani imilebe yokuqaba? Nazi ezinye zeendlela zokusebenzisa umlomo.
1.Uyipeyinta njani imilebe yomlomo ngebrashi yomlomo:
Faka umaleko wokuqaba umlomo ngaphambi kokuwusebenzisa ukugcina imilebe yakho ingaxoli.
Ukuba amantombazana anemilebe emnyama anokufaka umaleko wesiseko sekhrimu kuqala, yisebenzise ngokulinganayo kwimilebe yokugubungela ukufihla ngeminwe, kwaye ukuba amantombazana anemilebe elula angenza ngaphandle kwesiseko.
Zoba ipensile yomlomo ejikeleze ubume bemilebe yakho, emva koko faka ilipstick yakho ukwenza umgca ocacileyo welipstick egxininisa umbala welipstick yakho.
Okokuqala, gxobhoza i-cotton swab kwi-highlighter uze ufake i-M emlonyeni ophezulu ukuze ukhanyise imiphetho yomlomo kwaye ukhankanye imilomo ye-M.
Dipha ngebrashi yomlomo kwakhona thatha i-lipstick ngohlobo "M" ukwenza idayub ngamacala asekhohlo nasekunene, indawo yentsimbi yomlomo idonsa indawo ephezulu, embindini womlomo emlonyeni utsalela kude kangangoko kwindawo ephantsi.
Le yeyona ndlela ixhaphakileyo yokufaka umlomo.
I-lipstick ngokubanzi ikhonjisiwe, sibeka incam yomlomo, imivumbo emibini elula embindini womlomo ukwenza imeko ye-V yokuma.
Emva koko, ngentloko yakho ekhombayo ezantsi, qala kwiikona zomlomo wakho kwaye usebenze ngendlela yakho ezantsi embindini womlomo wakho ukubonisa umgca womlomo wakho ongasentla.
Emva koko nyibilikisa umlebe ongezantsi kwaye uthambise amatyeli aliqela de imilebe igcwale ngokulinganayo.
4.Luma imilebe yakho:
Sebenzisa i-lip primer ukwenza mhlophe umlomo wakho wokufihla kwaye uwugubungele ngombala wokuqala.
Sebenzisa ibrashi yomlomo ukuze udibanise imilebe yomlomo ngaphakathi kwemilebe yakho. Sebenzisa iminwe yakho ukusasaza i-lipstick ngaphandle komlomo wakho. Faka isicelo ngokulinganayo.
Icebo lokusebenzisa le lipstick kukutshintsha umbala ukusuka kumnyama uye ekukhanyeni ngaphakathi nangaphandle.
Okokugqibela, thambisa imilebe yomlomo ngaphakathi kwimilebe yakho ukuze wenzele umbala womlomo wakho.
Okanye eyona ndlela ilula kukuthenga nje imibala emibini yomlomo!
Uninzi lwe-lipstick ethengwe kwakhona ukufumanisa ukuba isiphumo sesicelo esinye asilunganga njengokucinga, ke kuya kufuneka usebenzise indlela yokugqagqana ukwenza i-lipstick yakho ijongeke ngakumbi.
Le ndlela yeyona ilula, njengeyona ndlela iqhelekileyo yokugquma, thambisa imilebe yomlomo emilebeni, kwaye ekugqibeleni usebenzise umaleko wokuqaba imilebe kumphezulu ofuna umbala unikezele ngeBlingbling
5. Indlela yokutyabeka ebomvu engathathi ntambo:
Inyathelo lokuqala kukusebenzisa nje umaleko wokuqaba umlomo, emva koko ucinezele umlomo wakho ngesihlunu. Thatha isiqwenga seethishu, usibeke emilebeni yomlomo wakho kwaye usithi nkxu ngebrashi yomlomo.
Dab ipowder kwaye uyihlambe kwimilebe yakho ngetawuli yephepha.
Ngale ndlela i-lipstick ayizukunamathela kwindebe!
Egqithileyo Isithunzi selihlo